Howard 500-105 FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 18.3 ကို MB
downloads ရယူရန္6005
Author: မီလ်တန် Shupe, စကော့သောမတ်စ်, ဇွာအု Paz
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 6, 2009: ဖြည့်စွက်ကုန်တင်ဗားရှင်း, ဗိုလ်မှူး Aircraft.cfg, ကို manual pdf
အဆိုပါအသံကသိပ်ကောင်းပါတယ်။ cockpit (2D နှင့် 3D), အခန်း (ထိပျတနျးထင်ဟပ်), အစွန်းရောက်အပြည့်အဝ panel က, စံနမူနာလေယာဉ်မော်ဒယ်။ (ကိန်းဂဏန်းများကြိုးစားကြည့်ပါ!) က Ultra နေရာလေးကိုက The 500-105 လက်ညှိုးနှင့်မျက်စိနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထားသည်။
စာမေးပွဲ F2, F3, etc .. !
သငျသညျထုတ်လုပ်သူအောက်မှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်: Howard Aero, Inc မှ .. ot တစ်ဦးပါ Give!
ဒီ add-on တစ်ခုအနေနဲ့ချီးမြှင် Flightsim Developers လက်ခံရရှိခဲ့သည်